Usoro ihe eji eme ihe na-eji AutoDesk Robot Structure - Geofumadas
Eprel, 2019 AulaGEO
Ntuziaka zuru oke maka ojiji nke Robot Structural Analysis maka ihie, ịgbakọ na imepụta ihe eji arụ na nchara.
Usoro ihe omume a ga - ekpuchi usoro ihe omume ọkachamara nke Robot Structural Analysis maka ihie, ịgbakọ na imepụta ihe eji arụ ya na ụlọ nrụpụta nchara.
N’uzu maka ilebanye anya n ’ụlọ, ndị injinia na ndị ọrụ nka nọ na mpaghara ahụ chọrọ ime ka ojiji Robot gbakọọ ọnụ ọgụgụ obodo dịka iwu ndị a kacha mara n’ụwa niile na n’asụsụ ha si chọọ.
Anyị ga-atụle ngwaọrụ okike nke ihe owuwu (osisi, ogidi, slabs, mgbidi, n'etiti ndị ọzọ). Anyị ga-ahụ otu esi arụ ọrụ gbakọọ maka ụdị modal na seismic, yana iji ụkpụrụ kwekọrọ na ibu seismic na traụza omenala. Anyị ga-amụ na mkpokọ ọrụ maka imewe nke ihe ndị gbanyere mkpọrọgwụ, na-achọpụta ngwa agha chọrọ site na ịgbakọ na kọlụm, osisi na slabs ala. N'otu aka ahụ anyị ga-elele ngwa ọrụ RSA dị ike maka ịkọwapụta ihe nhazi nke ihe siri ike n'otu n'otu ma ọ bụ na njikọta. Anyị ga-enyocha otu esi ewebata usoro iwu dị nkenke na atụmatụ zuru ezu na idobe nke nkwụghachi nke ogidi, osisi, slabs, mgbidi na ntọala ndị dịpụrụ adịpụ, jikọtara ọnụ ma ọ bụ na-agba ọsọ.
N’ezie mmụta a, ị ga-amụta iji ngwa RSA maka imewe njikọ nke igwe, na -emepụta echiche na-enweghị atụmatụ, na -eme ndetu mgbako na nsonaazụ dịka usoro mba ụwa si dị.
Emebela nkuzi a, ihe dị ka otu izu, ịrara ihe dị ka elekere abụọ n ’ụbọchị iji mata ihe omume ndị anyị ga-emekọ ọnụ n’oge niile, mana ị ga - esoro ọsọ ọsọ nke iru gị mma.
N'ime oge niile anyị ga - ekike atụ abụọ bara uru nke ga - enyere anyị aka n'akụkụ nke ọ bụla ka anyị hụ ngwaọrụ ịme ihe nke ụlọ na nke dị iche iche.
Ọ bụrụ n’idebanye aha maka usoro mmụta a, anyị na-ekwe gị nkwa na ị ga-arụ ọrụ nke ọma ma zie ezie mgbe ị na-arụ ọrụ nhazi, yana ịbanye na iji ngwa eji arụ ọrụ nwere ọtụtụ njiri mara, na-arụ ọrụ nke ọma.
Ihe nlere na imewe ulo siri ike na ulo ndi di n’ime RSA
Mepụta usoro geometric na mmemme
Mepụta usoro nyocha nke ihe owuwu ahụ
Mepụta nkwado zuru ezu nke nchara
Gbakọọ ma chepụta njikọ ọla dị ka ụkpụrụ si dị
Kwesịrị ịmararịrị akụkụ akụkụ ọmụmụ ihe gbakọọ ọnụ maka ihe owuwu
Ọ dị mma ka ịnwe mmemme ahụ ma ọ bụ ghara ịwụnye ụdị ikpe ahụ
Ebumnuche RSA a bụ maka iji arụ ụlọ, ndị injinia na onye ọ bụla metụtara ịgbakọ na ime atụmatụ nke ihe owuwu
Previous Post«Previous Usoro ihe owuwu ụlọ (Revit Structure + Robot + ihe siri ike na ihe nchara dị elu)
Next Post Nke kachasị mma na akụkọ banyere QGIS 3.XNext »